နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း | Ministry of Planning and Finance
Posted By : paprd_editor, Date : 26.06.2021 comment
၁။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့်မြေကွက် စုစုပေါင်း (၂၄)ခုကို ၈-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ နှင့် ၉-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတို့တွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရန် ကြော်ငြာခဲ့ပြီး COVID-19 ဖြစ်စဉ် ပြန့်ပွားလာမှုကြောင့် ၅-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်မံကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ COVID-19 စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့်မြေကွက် (၂၃)ခုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ယခင်အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူခဲ့သူများနှင့် ထပ်မံဝယ်ယူလိုသူများမှ ဝယ်ယူလိုသော Lot No. တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားအဆိုပြုလွှာ တစ်စောင်စီ တင်သွင်းရမည်။ သတ်မှတ်စပေါ်ငွေ P.O Cheque (Payment Order Cheque)အား တင်ဒါတင်သွင်းလွှာ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၂၈-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ
နေရာ - ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး
(စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်)
စပေါ်ငွေသွင်းရမည့် တန်ဖိုးကို အဆိုပြုလွှာ ဝယ်ယူသည့်အခါ တစ်ပါတည်း ဖော်ပြပေးပါမည်။
P.O Cheque တင်ပြရမည့်ရက် - ၂-၈-၂၀၂၁၊ ၃-၈-၂၀၂၁၊ ၄-၈-၂၀၂၁
တင်ဒါ တင်သွင်းရမည့်ရက် - ၅-၈-၂၀၂၁
- Lot No. (၁) မှ (၂၃) အထိ နံနက်(၁၀)နာရီမှစ၍ အစဉ်လိုက် လက်ခံပါမည်။
နေရာ - ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်
၅။ ဝယ်ယူလိုသည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့် မြေကွက်များအား ကြော်ငြာသည့်နေ့မှစ၍ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းသည့် အချိန်တွင် ဝယ်ယူမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့် မြေကွက်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်ဖြင့် ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။
၆။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၀၆၃၃၉၊ ၀၆၇-၄၀၆၁၃၃ တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့်မြေကွက် စုစုပေါင်း(၂၃)ခုကို ဤနေရာတွင် Click ၍ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
notice putwe-3.pdf9MB